जब यी बालिका जन्मिनासाथ २ गोली हानियो (भिडियोसहित) – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/जब यी बालिका जन्मिनासाथ २ गोली हानियो (भिडियोसहित)
बीबीसी- अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित एउटा अस्पतालमा आ’क्रमण हुँदा भर्खर जन्मिएकी एक बालिकालाई पनि गो’ली लाग्यो।आ’क्रमणमा उनकी आमाको मृ’त्यु भयो भने चिकित्सकहरूले ती नवजात शिशुलाई जोगाए।अमिना नाम गरेकी ती बालिकाका बुवा आ’क्रमणको साक्षी थिए। उक्त दु:खद घ’टना र छोरीको भविष्यबारे उनी के भन्छन्?
यो पनि- जब बर्थडेकै दिन नवाजुद्धिनलाई पत्नीले पठाइन् ‘डि-भोर्स’ म्यासेज
बलिउडका प्रभावशाली अभिनेता नवाजुद्धिन सिद्धिकीको ४६ औँ जन्मदिनको उत्वसका बेला नवाजुद्धिन भने पत्नी आलियाबाट सम्ब’न्धबि’च्छेदको सूचनाको सामना गरिरहेका छन् ।हालै इन्डियन एक्सप्रेससँग कुराकानी गर्दै आलियाले आफूले सम्ब’न्ध बि’च्छेदको सूचना नवाजुद्धिनलाई पठाएको खुलासा गरेकी छन् । मोबाइल म्यासेज र इमेल मार्फत पनि डि’भोर्सको लागि सूचना पठाएको आलियाले बताएकी छन् ।
तर नवाजुद्धिनले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । उनले पत्नी आलियालाई पनि कुनै जवाफ नफर्काएको बताइएको छ । नवाजुद्धिन लकडाउनका बावजद उत्तर प्रदेशसस्थित आफ्नो गाउँ पुगेका छन् । जहाँ उनकी आमा बिरामी छिन् ।पत्नी आलिया भने उनको साथमा छैनन् । ११ वर्षको वैवाहिक स’म्बन्ध तोड्दै डि’भोर्सको लागि आवेदन दिएको आलियाको भनाइ छ । यसका लागि आलियाले कानुनी उपाय अपनाइसकेकी छन् । उनीहरुका दुई छोरी समेत छन् ।
आलियाले अन्तर्वार्ताको क्रममा आफूहरुबीच एक दशकदेखि नै सम्बन्ध बिग्रि’एको पनि खुलासा गरेकी छन् । तर के कारणले सम्ब’न्ध बि’ग्रिएको भन्ने बारे उनले केही भन्न चाहेकी छैनन् । आलियाले भनेकी छन्, ‘मैले पहिले नै डिभो’र्स गर्नुपर्ने थियो,’उनले पहिले नै स’म्बन्ध तो’ड्नुपर्ने महसुश गरेको बताएकी हुन् । नवाजुद्धिनकी बहिनीको केही महिनाअघि मात्रै मृ’त्यु भएको थियो । अहिले आमा पनि सि’किस्त छिन् । यस्तो बेला उनी मुम्बइबाट उत्तर प्रदेश पुगेका छन् ।
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन – २५ गते आइतबारको राशिफल !
भुवन केसीलाइ महानायक भनेपछि नायिका निरुता सिंह पनि विवादमा, दिईन यस्तो स्पष्टीकरण